Abaalmarinta Caddaaladda - Falal Argagix - Afduubyada iyo Dilka
Afduubyada iyo Dilka
Lubnaan | 1985 illaa 1989
Dhowr afduub iyo dilal ayaa ka mid ahaa dhibaatooyinkii tobaneeyo sano ka socday Lubnaan ee afduubyadii ay ku kaceen argagixisada Hezbollah. Dhibaatada afduubka wuxuu socday intii u dhaxeysay 1982-kii illaa 1992-kii.
16-kii Maarso, 1984, waxay argagixisada afduubeen William Buckley, Madaxa Xarunta CIA-da ee Beirut. Buckley ayaa la su’aalay, lana ciqaabay waxayna haysteen muddo 15 bilood ah inta aan la gaarin taariikhda qiyaasta ah ee ay geeridiisu timid.
3-dii Diseembar, 1984, Maktabhayaha Jaamacadda Mareykanka ee Beirut Peter Kilburn ayaa lagu soo warramay in la la’ yahay. Lix iyo toban bilood kaddib, isaga iyo laba qof oo laheysteyaal ahaa ayaa rasaas lagu dilay, waxaana meydkoodii lagu riday buuraha ku yaal xagga bariga Beirut.
17-kii Feebaraayo, 1988, waxay argagixisadu afduubeen Gaashaanle Sare William Higgins oo markaasi saarnaa gaadiidka nabad ilaalinta Qaramada Midoobay. Intii uu ahaa qof laheyste ah, Gaashaanle Sare Higgins waa la wareystay waana la ciqaabay inta aan la dilin ka hor. Taariikhda saxda ah ee la dilay lama yaqaan.
William Buckley oo la Diley 1985
Peter Kilburn oo la Diley 1986
William Higgins oo la Diley 1989